Ixabiso eliphantsi leOrganic Organic kunye neComputer Rotary Drum Machine yokuThengisa kunye neFektri | YiZheng
Yintoni Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine?
Inkqubo ye- Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine ngumatshini omkhulu wokuvelisa osetyenziselwa ukomisa amasuntswana afunxa isichumiso kushishino lokwenza isichumiso. Sesinye sezixhobo eziphambili. Inkqubo ye-Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine kukomisa amasuntswana esichumiso somgquba ngamanzi angama-50% ~ 55% emva kwegranulation kumxholo wamanzi ≦ ama-30% ukufezekisa umgangatho wezichumiso eziphilayo. Xa isetyenziselwa ukugcinwa kwexesha elide okanye njengempahla eluhlaza ukuqhubekeka, umxholo wokufuma kufuneka ube yi-13%.
Yintoni Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine esetyenziselwa?
Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine isetyenziswa ngokubanzi ukomisa i-limestone ye-slag, umgubo wamalahle, i-slag, udongwe, njl njl.Umatshini wokuMisa unokusetyenziswa nakwizinto zokwakha, isinyithi, imichiza kunye nomzi mveliso wesamente.
Umgaqo wokuSebenza we Rotary Single Cylinder Drying Machine
Izixhobo zithunyelwa kwi-hopper ye Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine ngebhanti yokuhambisa okanye ilifti yebhakethi. Umgqomo ifakwe ithambeka kumgca oxwesileyo. Izinto ezingena emgqonyeni zivela kwicala eliphezulu, kwaye umoya oshushu ungena kumgqomo usuka kwicala elisezantsi, izixhobo kunye nokudibanisa umoya oshushu kunye. Izinto zokwakha ziye kwicala elisezantsi ngomxhuzulane xa umphanda ujikeleza. Iifters kwicala elingaphakathi lezinto zokuphakamisa umphanda phezulu naphantsi ukwenza izinto kunye nomoya oshushu oxube ngokupheleleyo. Ke ukusebenza kokomisa kuyaphuculwa.
Ziintoni iimpawu Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine?
* Ulungelelwaniso olunengqiqo, ubugcisa obugqwesileyo, imveliso ephezulu, ukusetyenziswa kancinci, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo, njl.
* Ulwakhiwo olukhethekileyo lwangaphakathi lomatshini wokumisa ojikelezayo uqinisekise ngezinto ezinamanzi ezingayi kubhloka kwaye zincamathele umatshini wokuMisa.
* Umatshini wokumisa iRotary unokumelana neqondo lobushushu eliphezulu ukuze umise umbandela ngokukhawuleza kwaye ube namandla amakhulu.
* Rotary Ukuqwayita Machine Kulula ukusebenza kunye nokugcina.
* Rotary Ukuqwayita Machine ungasebenzisa amalahle, i-oyile, irhasi, biomass njengamafutha.
Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine Video Display
Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine Model Ukukhetha
Olu ngcelele Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Machine uneentlobo ngeentlobo zeemodeli, ezinokuthi zikhethwe ngokokona kuphuma, okanye kwenziwe ngokwezifiso.
Iiparameter eziphambili zobugcisa zibonisiwe kule theyibhile ilandelayo:
Egqithileyo Nkqo isichumisi Umxhubi
Okulandelayo: Umatshini wokuPhucula umatshini weRotary